မြန်မာသံရုံး၊ ပေကျင်းမြို့က (၇၂)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ – Ministry of Foreign Affairs
မြန်မာသံရုံး၊ ပေကျင်းမြို့က (၇၂)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
(၁၄-၁-၂၀၂၀ ရက်၊ ပေကျင်းမြို့)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၂) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပေကျင်းမြို့ရှိ Grand Millennium Hotel ၌ ညနေ ၁၈၀၀ နာရီမှ ၂၀၀၀ နာရီအချိန်အထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ၏ အထူးဧည့်သည်တော် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Qin Gang ၊ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ ပေကျင်းမြို့အခြေစိုက် သံရုံးများမှ သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့် သံတမန်များ၊ ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများမှ အကြီးအကဲများ၊ စစ်သံမှူးများ၊ စစ်ဘက်/နယ်ဘက်မှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်း များမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ မြန်မာပညာတော်သင် ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ စုစုပေါင်း ဧည့်ပရိသတ် (၄၀၀) ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်သီချင်းများ ဖွင့်လှစ်၍ နိုင်ငံတော်အလံများကို အလေးပြုခြင်း၊ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးသန့်ဖေမှ (၇၂) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်း၊ အထူးဧည့်သည်တော် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Qin Gang က ဂုဏ်ပြုအမှာစကား ပြောကြားခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ ကြွရောက်လာသည့် ဧည့်သည်တော်များအား ဟိုတယ်အစားအသောက်များအပြင် မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအသောက်များဖြစ်သည့် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ သာကူ၊ မြန်မာလက်ဖက်ရည်တို့ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၊ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အက၊ အလှတို့ဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။